Iyo yakagadziridzwa iPhones musika ichasvikawo muIndia | IPhone nhau
Iko hakuna makambani mashoma anofunga izvo India Ndiwo musika unonyanya kukosha uri kubuda kuti utarise izvozvi. Ichi ndicho chikonzero makambani akaita seApple ari kubheja munyika yeIndia, vachiita zvibvumirano nezvitoro muIndia kuti vatenge zvavanoshandisa uye zvirongwa zvavo zviri kuvhurawo Apple Stores munyika. Zvakare, sezvakataurwa The Times of India, Tim Cook nekambani vakagadzirira kuunza India iPhones yakagadziridzwa.
Kambani yeCupertino parizvino iri kukumbira mvumo kubva kuHurumende yeIndia kuti iunze zvishandiso zvaimbove zvevamwe vanhu munyika, chimwe chinhu chayakaita nekuendesa a kukumbira zviri pamutemo kubazi rezvakatipoteredza nemasango. Kune avo vasingazvizive, izwi racho Kugadzirwazve, inozivikanwa zvakare seyakagadziridzwa kana kudzoreredzwa, inoshandiswa kudaidza zvishandiso zvakadzoserwa nemushandisi asina kugadzikana nekuda kwechikanganiso uye kuti kambani iri kutaurwa yakaongorora nekugadzirisa uye ndokuzoidzosera pakutengesa nemutengo wakaderera pane zvayaiva nazvo izvi imwe yakanga iri itsva.
MaIndia achakwanisa kutenga Yakagadziridzwa iPhones
«Chikumbiro cheApple chinokumbira kupinza maPhones akachengetedzwa kare anotengeswa muIndia uye kugadzira maPhones ane chitupa muIndia akatambirwa nebazi rezvakatipoteredza nemasango.«, Gurukota rezvekuterevhizheni Ravi Shankar Prasad.
Ruzivo rutsva urwu runouya mushure mekudzidza nezve Apple chinangwa che zvakapetwa chikamu chemusika kubva ku smartphone yako muIndia. Mwedzi wapera zvakazivikanwa kuti kambani inotungamirwa naTim Cook yave pedyo nekuvhura yayo Apple Stores munyika, saka zvaisazove zvakafanira kutengesa zvishandiso zvayo muzvitoro zvakagamuchirwa. Mushure memakore mashoma umo kutengesa kwe iPhone kwakawedzera nekutenda kuChina, zvese zvinoita senge zvinoratidza kuti Apple inoda kuita zvakafanana, asi panguva ino munyika yeIndia.
Chero zvazvingaitika, zvese zvinoita senge zvinoratidza kuti kutengesa kwe iPhone kuchadonha gore rino kekutanga kubvira iyo apple apple payakatengeswa muna 2007. Asi, ndiani anoziva, pamwe muna 2017 ivo vachapfuura kutengesa kwakawanikwa muna 2015. tichaona kana chichava kutanga kwekudonha kweiyo iPhone?
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » dzakawanda » Musika weakagadziridzwa iPhones achasvikawo kuIndia
Facer, ikozvino yavapo iko kunyorera kuti ushandise iwo maburi eApple Watch